Gaari Magaalada Muqdisho ka waday Wacyi-gelinta COVID-19 oo la Qarxiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaari Magaalada Muqdisho ka waday Wacyi-gelinta COVID-19 oo la Qarxiyey
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax lala eegtay gaari nooca raaxada ah oo barqadii Maanta ka dhacay agagaarka Garoonka kubadda Cagta ee Qoob-doore ee degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir.
Qarax oo ahaa miino ayaa lala eegtay gaariga oo ay ku xirnaayeen Sameecado waaweyn oo dadka looga wacyi-gelinayay Cudurka halista ah COVID-19, waxaana qaraxaas ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac.
Dad goobjoogayaal la hadlay warbaahinta gudaha ayaa u sheegay in qaraxaas uu ku dhintay hal qof oo ah Darawalkii waday gaariga la qarxiyay, halka ay ku dhaawacmeen saddex Askari oo la socday gaariga.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka ayaa tegay goobta uu qaraxu ka dhacay, isla markaana xiray waddooyinka halkaas gala , sidoo kalena wada baaritaano kala duwan oo ku aadan qaraxa.
Laamaha amniga dowladda Federaalka ayaa weli wax war ah kasoo saaray qaraxaas khasaaraha geystay eek a dhacay degmada Kaaraan, waxaana markii ugu horreeysay ee la qarxiyo gaari lagu xiray sameecado dadka looga wacyi-gelinayo Cudurka COVID-19.
DEG DEG:-Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Dowladda oo geeriyooday
Maamulka Gobolka Banaadir oo kulan ka yeeshay laba Arrin oo ka jira Muqdisho